Iran: Nanokatra fantsom-pahitalavitra persiana vaovao ny BBC · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2018 6:42 GMT
(Marihina fa tamin'ny 25 Janoary 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nahazo dera ny fandefasana ny Fahitalavitra BBC teny persiana tamin'ny 14 Janoary 2009 ary niteraka hafanam-po, ahiahy, ary nisarika ny saina raha fehezina ! Naneho ny hevitr'izy ireo momba ity fantsona vaovao ity ireo bilaogera Iraniana, ary samy manana ny heviny avokoa izy ireo.
Na dia nihevitra aza ny sasany fa afaka mampifandray ny tsy fitovian-kevitra eo amin'i Etazonia sy Iran ny fantsona vaovao dia niantso izany ho fandrahonana ny fiarovam-pirenena ny manampahefana Iraniana.
Nolavin'ny governemanta iraniana ny fanomezana alalana ho an'ny fahitalavitra BBC teny persiana hanokatra birao ao Iran, na dia manana birao any Londres aza ny Press TV izay tantanan'ny Repoblika Islamika .
Manolotra fandaharana maharitra 8 ora isan'andro ho an'ny tontolo miteny persiana ny Fahitalavitra BBC Persiana. Tsy ny loharanom-baovao manerantany avy amin'ny BBC ihany no zarainy, fa mizara ireo vaovao avy amin'ireo masoivohom-baovaony miteny persiana any Washington, Jerosalema, Beirut, Islamabad, Istanbul, Dushanbe ary Kabul ihany koa ry zareo.
Indro ny dokambarotra ho an'ny Fahitalavitra BBC Persiana. Milaza ny feo ao anatiny fa hisy ny fanolorana “Mozika sy mihoatra noho ny hira”:
LegoMahi , bilaogera sady mpamorona niteny hoe:
“Tena nampientanentana ahy ny hatsaran'ny kalitaon'ny fandaharan'ny BBC nandritra ny herinandro voalohany nijereko izany. Tahaka ny hoe mijery ireny hotely kintana 5 ireny aho, efi-baovao tena maoderina, … na toy ireny hoe fivarotan-dehibe any Iran tena mahavariana ahy ireny. Misy ireo andiana seho izay nasehony izay heverina ho mahazatra ho an'ny tontolo mandroso (ary indraindray aza tsy hoe tena mandroso), fa ho anay kosa dia toy ny nofinofy izany … Nahitanay ireo fandaharana manana kalitao ny BBC Persiana izay voalohany indrindra tamin'ny taranaka misy ahy. Ilay zavatra efa hitan'ny olona an-tapitrisany eto an-tany nandritra ny taona maro … Nanolotra anay ny taonjato faha-21 ny BBC rehefa tonga ny fiandohan'ny taonjato faha-21. “
Nanoratra i Mahjad fa tsara fanombohana ny BBC, “ary tena tsara lavitra kokoa noho ny noeritreretiko.” Saingy tsy maintsy misy hatrany ireo “olona be fialonana izay tsy mahay afa-tsy ny manaratsy ihany”.
Nanokatra bilaogy iray handalinana ny fandaharan'ny Fahitalavitra BBC Persiana i Seaman ary nilaza fa toa tsy manana programa firy izy ireo indraindray ary mamerimberina izany imbetsaka, toy ny “Kamkara”, fandaharana iray momba ny tarika mpihira.
Nilaza i Bamdadi fa tokony ho faly isika hoy izy, fa tsy mientanentana. Nilaza ilay bilaogera fa nifarana ihany ny ampihimamba atao amin'ny fampitam-baovao sasany toy ny Voice of America amin'ny teny Persiana sy ireo fantsona any Los Angeles, amin'ny kalitao ambany, izay tohanan'i Etazonia. Raha faly izy satria lasa tsy maintsy hanatsara ny fandaharany manokana ary hampihena ny fampielezan-keviny ny fahitalavitra ofisialy ao Iran dia niahiahy ihany ilay bilaogera hoe:
Noho ny tsy fisian'ny mpifaninana aminy, mety hahasarika olona haingana noho ny fahamendrehany sy ny lazany eo amin'ireo Iraniana ny BBC ary hanomboka hanova ny hevitry ny vahoaka Iraniana amin'ny tombotsoan'ny Fanjakana Britanika sy ny mpiara-dia aminy.”
Nahatsiaro i Menbar, mpitondra fivavahana Islamika, fa mpihaino ny onjam-peo BBC ny rainy nandritra ny adin'ny Iran sy Iraka. Nilaza izy fa matihanina ny BBC TV ary manana ny rakipeon'ny antsafa amin'ny ora maromaro izay nifanaovana tamin'ny olo-malaza Iraniana ity fahitalavitra ity. Nanontany tena izy raha manana rakipeo tahaka izany ny fahitalavitra Iraniana.